ဘဲဥပုံအတိုင်းစက်ဘီးစီး, လေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်, ပြောင်းပြန်စားပွဲတင်, လျှပ်စစ်စကူတာ - Maibu
2017 model အသစ် / AC အ MOTOR ကုနျသှယျ treadmill A / C ...
200W ခြေလျင်ကြံ့ခိုင်ရေးစက်အရူးမထိုက်မတန်အနှိပ် vib ...
နောက်ကျောနာကျင်မှုဘဝဂီယာ inver ၏ပုံစံအမျိုးမျိုးသက်သာရာ ...
MSTAR ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိသားစုရွှေ့ပြောင်းချည်ငင်ကိုသုံးပါ ...
2018 ပူရောင်းချလွယ်ကူသောအရစ်ကျလျှပ်စစ်အိမ်မှာ TR ...
2018 တုန်ခါမှုပန်းကန်တုန်ခါမှုလွှဲလေ့ကျင့်ခန်းကို p ...
2018 လက်ကားကြံ့ခိုင်မှုစက်, အားကစားစက် ...
သံလိုက် Swing လည်ဆိုင်ကယ် / X ကိုဆိုင်ကယ်
A new report published by Allied Market Research, titled, “Fitness Equipment Market by Type and User: Global Opportunity Analysis and Industry Forecast, 2018 – 2025,”projects that the global fitness equipment market i...ပိုပြီးဖတ်ပါ
The Boys and Girls Clubs of Dorchester celebrated the openinganew third-floor gym last Wednesday, May 29. The facility was created by Planet Fitness. Shown, front row, l-r: Cordell Givens, 16; Planet Fitness regiona...ပိုပြီးဖတ်ပါ
- ဒါဟာကွဲပြားခြားနားသောအချက်များပေါ်တွင်တစ်ဦးကိုကြိုတင်စဉ်းစားရှုထောင့်ကြံခိုင်ရေးပစ္စည်းကိရိယာစျေးကွက်တိုးတက်မှုနှုန်းကားမောင်းသို့မဟုတ်သိမ်းထားသောပေးပါသည် - ဒါဟာလိုအပ်သောထုတ်ကုန် segments များနှင့်၎င်းတို့၏အနာဂတ်လက်ခံအတွက်ကူညီပေးသည် - ဒါဟာ pin ကိုအထင်ကရနေရာများကယ်တင်တတ်၏ ... ပိုပြီးဖတ်ပါ
အဆိုပါလေ့လာမှုအစီရင်ခံစာမြေမျက်နှာသွင်ပြင်၏အခြေခံပေါ်မှာအောက်ပါဒေသများသို့ bifurcated ဖြစ်ပါတယ်: မြောက်အမေရိက (အမေရိကန်, ကနေဒါနှင့်မက္ကဆီကို), ဥရောပ (ဂျာမနီ, ပြင်သစ်, ဗြိတိန်, ရုရှားနှင့်အီတလီ), Asia-Pacific (တရုတ်, ဂျပန်, ကိုရီးယား .. ။ ပိုပြီးဖတ်ပါ
တုန်ခါမှုလေ့ကျင့်ခန်းစက် , ပြောင်းပြန်လှန်ဇယား, တုန်ခါမှုပြား , သံလိုက်နင်းလေ့ကျင့်ခန်းဆိုင်ကယ်, တုန်ခါမှု Belly နှိပ်ခါးပတ် , Abdominal Trainer,